Poltergeist တစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ - အိမ်
စိတ်ဖိစီးမှု၏ ဖက်ရှင်သတင်း ကြံ့ခိုင်ရေး မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် ကျွမ်းကျင်သူကိုမေးပါ သတင်း ချက်ပြုတ်နည်းများ Gynaec အောင်မြင်သူ ချက်ချင်းပြင်ဆင်ချက်
Reter Master ကကျွန်တော့်ကို Poltergeist တစ်ယောက်ပြောခဲ့တယ်။ ဒီမှာငါလုပ်ခဲ့တာနောက်တစ်ခု
သင်ယူရရှိသောသင်ခန်းစာ - သင်မလုပ်ဆောင်မီသင့်အိမ်၌မည်သူနေထိုင်သည်ကိုသိရှိရန်မသိခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာငါကဇိမ်ခံရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်မိဘများပိုင်တိုက်ခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ငှားသူများ၏ကြိုတင်စာရင်းပြုစုထားခြင်းအကြောင်းကိုကြားသိခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့၏ S & M escapades နှင့်အတူပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုလုံးကိုနှိုးထားသော NYU grad ကျောင်းသားများ၊ အဘယ်သူ၏ကလေးများအားလုံးနံရံများကျော်စာတန့်နံပါတ်များကိုစွန့်ခွာနှုတ်ဖြင့်ကြမ်းတမ်းဖခင်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, အာကာသ refresh လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါနှင့်စေ့စပ်ထားသောငါနှင့်နွေရာသီတွင်နံရံများအင်္ဂတေနှင့်ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ရေချိုးခန်းကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်မီးဖိုချောင်ကိုအူမကြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မီးဖိုချောင်ကဆောက်လုပ်ရေးဇုန်ဖြစ်နေတုန်းပဲ၊ နွေရာသီရဲ့အပူဆုံးနေ့တွေမှာကျွန်မတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲဖုန်မှုန့်များနှင့်လေမှုတ်ထုတ်သည်ဖြစ်စေလေဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီးအမှုန်မှုန့်တွေဟာမျက်နှာပြင်တိုင်းကိုတွယ်ကပ်နေတယ်။ ဒီနေရာမှာလှပပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတယ်။ သို့သော်၎င်းကိုယခင်အိမ်ငှားသူအဖြစ်များသည့်နေရာကိုခေါ်ဝေါ်ပါ ပိတ်ထားသည် ငါ့အတွက် ။
ငါ L.A. -based ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူနန်စီလူးကပ်စထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိနေ့, Creative နေအိမ်ကုသမှု ငါသည်ငါ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ရေကန်နိုးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုရှာဖွေနိုင်ဘူးငါကြင်နာရတယ်ခံစားခဲ့သည်။ လူးကပ်စဝေးလံခေါင်ဖျားရှင်းလင်းရေးအပါအဝင်သူမ၏ကုမ္ပဏီ၏အများအပြားအိမ်မှာကုသမှုန်ဆောင်မှုမှငါ့ကိုမိတ်ဆက်ထွက်ရောက်ရှိသောအခါ, ငါကတွေ့ကြုံခံစားဖို့အခွင့်အလမ်းမှာခုန်ခဲ့ရသည်။
၀ န်ဆောင်မှုကို ($ 220 / session) သဘောတူလိုက်ပြီးနောက်လူးကပ်စကသူမကိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဟက်ဆက်မက်ကဲလ်၊ ရိုင်ကာမာစတာ၊ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်မှာ!
ဘယ်လိုဝေးလံခေါင်သီအိမ်မှာရှင်းလင်းရေးစတင်သလဲ သင်တန်း FaceTime နှင့်အတူ။ McCall နဲ့ကျွန်တော်ဟာမိနစ် ၃၀ ကြာကွန်ဖရင့်ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ထမင်းစားစားပွဲမှာထိုင်ပြီးအိမ်သမိုင်းမှာစကားပြောနေတယ်။ သူမသည်နွေးထွေး။ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုရှိပြီးအနာပျောက်စေသောအနုပညာရှင်ထက်မာသာစတူးဝပ်နှင့်တူသည်။ အရင်အိမ်ငှားတွေအကြောင်းကျွန်မကိုပြောပြီးမကြာခင်မှာကျွန်မမှာပိုက်ပြproblemsနာတစ်ခုခုရှိလားလို့သူမကကျွန်မကိုမေးခဲ့တယ်။ Gulp ။ Poltergeist စွမ်းအင်သူမကကြေညာခဲ့သည်။ ငါပြောနိုင်တယ် ထို့နောက်သူသည် poltergeist စွမ်းအင်သည်သင်၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်နှင့်ကွဲပြားကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ Poltergegeists များသည်အန္တရာယ်များထက်ပိုမိုမကောင်းသောအကြံအစည်များဖြစ်ပြီး၊ လူငယ်တစ် ဦး နှင့်မိမိကိုယ်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးထိုလူမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ဒီစွမ်းအင်အင်အားဟာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သော့တွေ၊ ပိုက်ပြproblemsနာတွေနဲ့တောက်ပနေတဲ့မီးတွေလိုသေးငယ်တဲ့မကျေနပ်ချက်တွေနောက်ကွယ်မှာရှိတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။
McCall ငါအမည်တောင်မှမတတျနိုငျတဲ့အာရုံရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါမူကား creepiest အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်: သင်ကသင်တစ် ဦး စေးကပ်ခံစားသည်ဟုခံစားရတယ်တယ်, သူကဆိုသည်။ ကပ်ရောဂါ။ ဒါကငါတိုက်ခန်းထဲမှာငါခံစားခဲ့ရအတိအကျအရာ: လေရန်အလေးချိန်, စောင်ရေမရှိခြင်းနှင့်ငါ့ခြေလက်အနည်းငယ်ခဲ ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည်တဲ့သဘော။ သူမဘာဝနာ, Reiki သင်္ကေတများနှင့်ချိန်သီးအလုပ်သုံးပြီးအာကာသထဲကိုအဝေးကနေသွားမယ်ဆိုတာကို McCall ကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ ငါကရူးနေတယ်၊ သူမကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုအချိန်အတန်ကြာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အာကာသကဘယ်လောက်အတိတ်ဆုံးဖြစ်မလဲလို့ငါ့ကိုမေးပြီးနောက်မက်ကဲလ်ကနာရီကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်။ ဆိုလိုတာကငါ့နာရီကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပြောလိုက်တယ် - ဒါဟာဖြစ်ပျက်နေတယ်။ အသံ kooky? ဒီကနေ့တကယ်တော့ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးပဲ။ အရ ဝါရှင်တန်ပို့စ် အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းသည်စွမ်းအင်ကုသမှုကုထုံးများကိုကြိုးစားခဲ့ကြပြီးယနေ့အထိအမေရိကန်ရှိဆေးရုံ ၈၀၀ ကျော်တွင် Reiki ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသီအိုရီများနှင့်ခ) ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုရှုတ်ချသောသိပ္ပံပညာရှင်များမှအကြီးအကျယ်တွန်းပို့ခဲ့သည်။
ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မက်ကေးလ်ကကျနော့်နေရာကိုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာဖော်ပြပြီးသူက 'နေရာတော်တော်များများမှာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ယခင်အိမ်ငှားများယူဆောင်လာသည့်နတ်ဆိုးပုံစံဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်ဤအရာသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လေ့ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်အားနည်းသောစိတ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုသူမကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ 'ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရည်းစားထားလား။ အိမ်ငှား? အထီးစွမ်းအင်ဒီareaရိယာ၌အမှောင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်။ သူကကျွန်တော့်ကိုတိုက်ခန်းထဲမှာပိုလန်သမားတွေရဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကအာကာသထဲမှာဖြစ်စေ၊ ဒါကမီးဖိုချောင်ထဲမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိတယ်။ ' ကျေးဇူးတင်စရာကသူမကအစီရင်ခံတင်ပြသည်မှာအဆောက်အအုံ၊ အိမ်နီးချင်းများ၊ လမ်းများသည်ဘယ်တော့မျှကျိန်စာသင့်ခြင်းနှင့်သင်၌တစ္ဆေများမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ (အနည်းဆုံးတော့အဲဒီမှာရှိတယ်။ ) နောက်ဆုံးတော့သူကညှိဖို့ခက်တဲ့ forks, တိဘက်ခေါင်းလောင်းသံနဲ့အထွေထွေတေးဂီတစတာတွေအများကြီးလုပ်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ အသံသည်မကောင်းသောစွမ်းအင်များကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုသင်စဉ်းစားလျှင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ကျွန်မချက်ချင်းပဲအဖေ့ကိုမေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အိမ်ငှားတွေရှိလား။ ငါတို့လောင်းခဲ့တယ် ယခင်ပိုင်ရှင်များ၏မူးယစ်ဆေးစွဲဝမ်းကွဲသူ (ငါ၏အလက်ရှိရုံး) တွင်နေထိုင်ခဲ့အိပ်ခန်းစွန့်ခွာရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ငါ့မိဘ၏ပိတ်ပွဲရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအထိကျင်းပခဲ့သည်။ သူကတံခါးသော့ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးထွက်မလာတော့ဘဲနောက်ဆုံးတွင်သူအားအင်အားဖြင့်နှင်ချလိုက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါဟာနယူးယောက်စီးတီးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကယ့်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုကျန်းမာမှန်းဆဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုံးဝနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ထားခဲ့တယ်။
ထိုညတွင်ကျွန်ုပ်သည်သက်သာမှုရသင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်အရာရာအားလုံးသိသည်။ ကျွန်ုပ်၏မှန် (လေ) တွင်တောက်ပနေသောအလင်း၊ အိမ်ဟောင်း၏အသက်ရှူသံ (အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောသစ်သားများ)၊ ဖန်ခွက်တွင်ရေတုန်ခါနေသည် (အနီးအနားရှိမြေအောက်ရထား) ။ ငါမျက်တောင်ခတ်မအိပ်ခဲ့ဘူး။ McCall ကအခန်းများသည်ရွေ့လျားနေပြီးအခြေချရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်ဟုသတိပေးခဲ့သည်။ သုံးညအိပ်ပြီးနောက်တိုက်ခန်းသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းကနောက်ဆုံးတော့ရွေ့လျားကျဆုံးခြင်း၏ကြည်လင်ပြတ်သားစွာပါပဲ။ ဒီတစ်ခါလည်းကစိတ်ကို၏ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ poltergeists စာသားအရာဖြစ်ကြပြီးငါမရှိတော့တ ဦး တည်းရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ (?!)
လူးကပ်စအားသူမ၏အဆိုကိုထောက်ခံရန်သိပ္ပံပညာကိုတောင်းဆိုသောအခါသူမကဤသို့ပြောခဲ့သည် - အာကာသအတွင်း၌ကုဗစင်တီမီတာတိုင်းသည်တုန်ခါနေသောစွမ်းအင်နယ်ပယ်များနှင့်ပြည့်နေသည်။ သင့်အိမ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်သာသာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်အီစွမ်းအင်များလည်းရှိသည်။ ' အင်း ... ဟုတ်တယ် ... ဒါဆိုဒါကဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ သူမဘာပဲလုပ်လုပ်အခုကလေးလိုအိပ်ပျော်နေတယ်။
Categories Celeb စတိုင် ပြည်တွင်း သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု
ဆံပင်အတွက် Kalonji ဆီသုံးနည်း